Baan Igbe Nri Abalị - Imewe Mmewe
Igbe Nri Abalị
Igbe Nri Abalị "Emi" bụ ụdị kọbọd nke edepụtara maka aha nke nri abalị. Ọ bụ ọdịdị na ike pụrụ iche bụ akụkọ na-egosi ọrụ. E nwere ọtụtụ njiri mara atụmatụ nke kabinet. Ọrụ dị iche iche na atụmatụ nke kọbọd ndị akụkọ na-ekewa dịka Cutlery na igbe nke anụ ahụ na-anọchi anya ebe a na-etinye ọkụ na anwụrụ ọkụ. Ọzọkwa, iko cha cha na-anọchite anya chandelier ma oche a na-anọchi anya steepụ ahụ. Enwere isi ihe anọ nke ụlọ ebe echiche akụkọ.
Aha oru ngo : Baan, Aha ndị na-emepụta ya : Mr. Paitoon Keatkeereerut, Mr.Chawin Hanjing, Aha onye ahịa : Partly Cloudy Studio.
Igbe Nri Abalị Mr. Paitoon Keatkeereerut, Mr.Chawin Hanjing Baan